विचार Archives - फ्रन्टलाईन नेपाल
Featured 03 विचार
डिल्लीराम बाँस्तोला चीनको वुहानबाट २०१९ डिसेम्बरमा देखा परेको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस डिजिज २०१९) लाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मार्च ११ मा विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरिसकेकोे छ । विश्वका २०० भन्दा बढी राष्ट्र प्रभावित भइसकेका, झण्डै विश्वको एक चौथाइभन्दा बढी जनसङ्ख्या लकडाउनमा रहेका र यसको न्यूनीकरण तथा उपचारका लागि विश्व नै सक्रिय रहेको अवस्था छ । […]
२७ चैत्र २०७६, बिहीबार २१:२५ April 9, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
रितु थापा, गुन्जन यतिखेर चीनको चिउचियांग विश्वविद्यालयको प्रांगणभित्रैबाट मैले यो लेख लेखिरहेकी छु । हुन त म कुनै लेखिका होइन । यसअघि कहिल्यै लेखेकी पनि छैन । तर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहँदा र नेपालतिर नेपालीहरुको तौरतरीका हेर्दा केही नलेखि रहन सकिन । म गत वर्ष अर्थात् सन् २०१९ को अक्टोबर २४ का दिन एमबिबिएस अध्ययनको […]
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १७:२१ March 29, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
अविस्मरणीय दिन माघ १६
पुरुषोत्तम बस्नेत एकतन्त्रीय राणाशासनको विरोधमा नेपाल प्रजापरिषद्ले अति गोप्य रूपमा चौथो पर्चा पनि ल्यायो । त्यसले राणाहरू हतप्रभ भए । सबैतिर उनीहरूको कडा निगरानी रहेकोे, उनीहरूको पूर्ण नियन्त्रित भूमि नेपालको राजधानीमा नै पर्चा कसरी छरियो ? राणाहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिए र कडा छानबिन सुरु गरे । वि.सं. १९९७ को कात्तिक २ गतेदेखि व्यापक धरपकड प्रारम्भ गरियो । पक्राउ […]
१६ माघ २०७६, बिहीबार १०:२२ January 30, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
नरेन्द्र रौले ‘हेलो नरेन्द्र ।’ मोबाइल उठाउने बित्तिकै बोली सुनियो । दाङको यात्रामा छु । उत्साहित मनमा दुईटा कुराले डेरा जमाएका छन्, रिर्पोटिङ र घुमफिर । एयरफोनमा मीठा गीतहरु गुन्जिरहेका छन् । काठमाडौंबाट रफ्तारमा गुडिरहेको गाडी नारायणघाट पुग्नै लागेको छ । एक्कासि अप्रिय खबर आयो, ‘भाउजु बित्नुभयो । तुरुन्त घर आउनु ।’ गोकुल अंकलले फोनमा […]
साना ढकाल रुपा २३ कटिसकेकी कामकाजे युवती हुन् । आजकल उमेरसंग-संगै उनको तनाब पनि बढ्दैछ । तनाब बढ्नुको कारण ‘लभ अफेयर्स’ वा पारिवारिक कारण होइन । कारण, भविष्यप्रतिको चिन्ता र पहिचानको खोजी हो । उनि भन्छिन्, ‘कहिलेसम्म सानो-तिनो जागिरमा अल्मलिनु रु समय बित्दैछ, अब पनि आफ्नो केहि काम राम्रो नगरे अगाडी बढ्न मुस्किल छ ।’ […]
भोट हालेर के पाइन्छ ?
एलिजा ढकाल देश प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन पश्चात् दोश्रो चरणको निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा छ । चुनाबको माहोल कतै उत्साहजनक छ भने धेरै ठाउमा मतदातामा नेता र राजनीतिप्रतिको आक्रोश छ । म निर्वाचनका क्रममा मत माग्न धेरै ठाउँ पुगें । भोट हालेर के पाइन्छ ? चुनाबमा भोट माग्न मात्र आउने, चुनाबपछि हाम्लाइ […]
१३ पुष २०७४, बिहीबार ०५:४९ January 1, 2018 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)